Semalt सामग्री मार्केटिंग सल्लाहहरू प्रत्येक व्यवसायको लागी उपयोगी छ
Semalt सामग्री मार्केटिंग सल्लाहहरू प्रत्येक व्यवसायको लागि उपयोगी छ
इन्टर्नेट उद्यमीहरू, बजारहरू, ब्लगरहरू, विज्ञापनदाताहरू र उनीहरू सबैको साथ तपाईंको भारको लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। चाँडै सामग्रीको मात्रा लगातार बढ्दै जाँदा, प्रतिदिन देखा पर्ने कम गुणस्तरको सामग्रीहरूको विशाल प्रतिशत छ। त्यहाँ यसलाई "hype" कम नोट ग्रेड सामग्री रिलिज गर्ने प्रवृत्ति छ र नोटिस पाउनुहोस्। जे होस्, कुनै पनि व्यवसायको लागि, जुन दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हो, आफैलाई उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको साथ प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले उत्पादको रूपमा सामग्री कम्तिमा मार्केट गर्नुपर्छ। जुलिया वाश्नेभा, Semalt डिजिटल सेवाहरूको अग्रणी विज्ञ, वर्णन गर्दछ कि कुन सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरू प्रत्येक कम्पनीले नियोजित गर्नु पर्छ सफल हुनको लागि।
यो उच्च-गुणवत्ता सामग्री सिर्जनाको साथ सुरू हुन्छ। यदि तपाईं अनलाइन काम गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए सामग्री मार्केटिंग तपाईंको व्यवसायको मुटु हुनुपर्दछ। तपाईको बजार कस्तो स्थान हो भन्ने कुराले फरक पार्दैन, तपाई के बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईको मूल्य-पोइन्ट के हो। तपाइँले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तरीकाले तपाइँको व्यवसायको छवि, ब्रान्ड प्रतिष्ठा, र श्रोताको वफादारी परिभाषित गर्दछ। एक अनलाइन उद्यमी को रूप मा, तपाइँ आफ्नो श्रोताहरु लाई प्रासंगिक, विचारोत्तेजक जानकारी दिनु पर्छ।
आफ्नो ग्राहकहरुलाई उत्साहजनक विज्ञापनको निरन्तर दवावमा राख्नुको सट्टा मानिसहरूलाई सचेत बनाउन प्रयास गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सचेत निर्णय लिन मद्दत गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई बुद्धिमान, विचारशील खरीददारहरू र लगानीकर्ताहरू जस्तो महसुस गराउनुहोस्, र तपाईं निश्चित रूपमा बिक्री बढाउनुहुनेछ। विश्वसनीय र जानकारीपूर्ण सामग्री निरन्तर सिर्जना गर्न जारी राख्नुहोस्। यसैले, तपाइँ तपाइँको छनौट बजार को आलामा विश्वसनीयता हासिल गर्नुहुनेछ। जब तपाईं उत्पादनहरू र सूचनाहरूको एक विश्वसनीय स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईंको सिफारिशहरू बढाइएको नाफामा गुंज्याउँछन्।
दर्शकहरु संग संचार एक लामो अवधि के व्यापार को निर्माण को लागी आवश्यक छ। तपाईंको सामग्री तपाईंको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन कुनै पनि उद्यमी, ब्लगर वा बजारका लागि मुख्य उपकरण हो। जब तपाईंसँग भन्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंले निश्चित रूपमा सुन्नु पर्छ। तपाईंको विचार अनुवाद गर्न सबैभन्दा प्रभावशाली च्यानलमा निर्णय लिनुहोस्।
यो १ 140० क्यारेक्टर वा कममा भन्न सकिन्छ? यसलाई ट्वीट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईंलाई लाग्छ यो ब्लग पोष्ट हुन सक्छ? यसलाई तपाईंको साइटमा राख्नुहोस्, अरू कसैको ब्ल्ग, तपाईंको दर्शकहरूलाई न्यूजलेटर सिर्जना गर्नुहोस् वा प्रकाशनको लागि पत्रिकामा पेश गर्नुहोस्। तपाईंको सामग्री वितरण गर्न दर्जनौं तरिकाहरू छन्। तपाईं कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सोच्नुहोस्। के यो एक YouTube मैत्री दर्शकहरु हो? वा, हुनसक्छ, न्यूजलेटर अझ राम्रोसँग फिट हुनेछ? याद गर्नुहोस्, यो तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू वा पाठकहरूसँग संवाद गर्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरीकाको बारेमा हो।
आवश्यक सम्बन्ध बनाउनुहोस्
यदि तपाईं सार्वजनिक बोल्ने, प्रस्तुत गर्ने, वा सामग्री मार्केटि in गर्ने पाठ्यक्रमहरूमा भाग लिनुभयो भने, तपाईंले पहिल्यै यो सुनिसक्नुभएको छ। अझै, यो पर्याप्त भन्न सकिदैन। तपाइँको श्रोतालाई चिन्नुहोस्। तपाईको अनुयायीहरूसँगको सम्बन्ध भन्दा बढी तपाईंको व्यवसायको लागि आवश्यक के हुन सक्छ? तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्। जान्नुहोस् तिनीहरू को हुन्, उनीहरू के चाहन्छन्, र उनीहरूको आवश्यकताहरू के हुन्। प्रत्येक दिन तिनीहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् तपाईंको सम्बन्ध फस्टाउनको लागि।
सामग्रीको पदार्थमा काम गर्नुहोस् र पाठकको लागि यसको मान बढाउनुहोस्। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले साझा गर्नुभएको सामग्री अंततः उपयोगी छ। आफैंलाई आफ्ना ग्राहकहरूको जुत्तामा राख्नुहोस्। के तपाईं अनावश्यक केहि पढेर आफ्नो समय खेर फाल्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, कसैलाई मनपर्दैन। तर तपाइँले तपाइँका श्रोताहरूको लागि महत्वपूर्ण विचारहरू र चाखलाग्दो जानकारी ल्याउनु भए पछि तिनीहरू कृतज्ञताका साथ तपाइँलाई इनाम दिनेछन्।
श्रोतालाई संलग्न गर्नुहोस्
तपाईंको दिमाग खाली गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्रीमा फरक परीबाट हेर्नुहोस्। रचनात्मक हुनु र बाकस बाहिर सोच्न तपाईंको श्रोता संग एक मजबूत अन्तरक्रिया सिर्जना गर्दछ। यसबाहेक, तिनीहरूलाई तपाईंलाई चिन्न दिनुहोस्। तपाईंको नाम, तपाईंको तस्वीर र मिनी-बायो तपाईंको सामग्रीको साथ त्यहाँ राख्नुहोस्। ढोका खोल्नुहोस् र मानिसहरूलाई भित्र जान दिनुहोस्। जब व्यक्ति तपाईंसँग एक व्यक्तिको रूपमा सम्पर्कमा आउँछ, उनीहरूले तपाईंले भनेको कुरा सुन्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
अवश्य पनि, यी सबै अभ्यासहरू तपाईंको सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिको अंश बन्नेछ। तपाईको विचारलाई निरन्तर पछ्याउनु पर्छ तपाईको उद्योगमा एक नेता बन्नको लागि। Semalt का सबै ग्राहकहरु लाई थाहा छ कि सामग्रीको गुणस्तर एक दीर्घ-अवधि लगानी हो जसले तपाईंलाई ठूलो पुरस्कार दिन्छ। तपाईंको आवाज तपाईंको अग्रणी उत्पाद बन्छ।